Covid-19: Nodimandry tao amin’ny CHU Morafeno-Toamasina i Maitre Roger
dimanche, 17 mai 2020 18:23
Nambaran’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondrateny ofisialy ny Foibem-pibaikoana ny Covid-19, androany atoandro tamin’ny haino aman-jerimpanjakana fa nisy lehilahy iray 59 taona, teraka ny taona 1961 tao Vavatenina, nodimandry tao Toamasina. Ity no tranga fahafatesana voalohany taorian’ny 19 marsa 2020 nahitana voalohany tranganaretina Covid-19 miisa telo teto Madagasikara.
Kasaona Roger na Maitre Roger araka ny fiantson’ny mpiara-miasa aminy ity nodimandry ity. Zaza kambana izy, ary tia fanatanjahantena, indrindra ny baolina kitra. Mpilalao kitra tao amin’ny klioban’ny hopitaly izy fahavelony. Isan’ireo voatily fa nitondra ny tsimok’aretina Covid-19 i Maitre Roger, ary notsaboina tao amin’ny hopitaly manarapenitra CHU Morafeno, andraisana an-tanana ireo mararin’ny Covid-19, no tsy tana ny ainy omaly sabotsy 16 may 2020.
Mpiasa tao amin’ny Fiadidiam-paritry ny fahasalamana DRS Atsinanana i Maitre Roger, fahavelony. « Secrétaire de direction » ny andraikiny, fa noho ny taonany efa nandroso dia natao « responsable Courrier » izy nony taty aoriana, ary izay no ahitan’ny olona azy matetika eo amin’ny « Parking » eo amin’ny Hopitaly Kely misy ny biraon’ny DRS Atsinanana sy ny Médecin inspecteur Toamasina I rahateo.
Taizan’aretina diabeta sy tosidra izy. Ireo no nidirany hopitaly tao amin’ny hopitaly be ary notsaboina efatra andro tao izy ; ny sabotsy 9 may 2020 Maitre Roger no nafindra notsaboina tao amin’ny CHU Morafeno rehefa voamarina taorian’ny fitiliana Covid-19 natao azy. Isan’ireo telo narary mafy izy omaly, dia izao nodimandry izao.
Nalevina avy hatrany ao Marokarazana, lalana mandeha Aéroport Ambalamanasy, Toamasina II ny nofo mangatsiakany taorian'ny fikarakarana nataon'ny tao amin'ny hopitaly, fianakaviana akaiky azy ihany no afaka nanatrika ny fandevenana.
Miisa 304 ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 teo anelanelan’ny 19 marsa sy 16 may 2020, ka tranga vaovao ny 21 tamin’ireo. Efa sitrana ny 114 raha mbola manaraka fitsaboana ny 190 ka marary mafy ny roa amin’ireto farany. Iray namoy ny ainy.